Kutheni le nto ii-infographics zithandwa kangaka? Inqaku: Umxholo, uPhando, uLuntu kunye nokuGuqulwa! | Martech Zone
NgoMgqibelo, Matshi 6, 2021 NgoLwesine, Aprili 7, 2022 Douglas Karr
Uninzi lwenu ndwendwela ibhlog yethu ngenxa yomzamo ongaguquguqukiyo endiwenzayo ekwabelaneni nabanye intengiso yolwazi. Ngamafutshane ... Ndiyabathanda kwaye badume ngendlela emangalisayo. Kukho izizathu ezininzi zokuba kutheni i-infographics isebenza kakuhle kwizicwangciso zokuthengisa zedijithali zamashishini:
Visual -Isiqingatha seengqondo zethu sizinikele kumbono kwaye i-90% yolwazi esilugcinayo luyabonakala. Imizekeliso, iirafu, kunye neefoto zonke zizinto ezinokubaluleka ekunxibelelaneni nomthengi wakho. I-65% yabemi ngabafundi ababonwayo.
Imemori - Izifundo zifumene ukuba, emva kweentsuku ezintathu, umsebenzisi ugcine kuphela i-10-20% yolwazi olubhaliweyo okanye oluthethiweyo kodwa phantse i-65% yolwazi olubonakalayo.
usasazo -Ingqondo inokubona imifanekiso ehlala i-13 milliseconds kwaye amehlo ethu angabhalisa imiyalezo engama-36,000 ngeyure. Singayifumana ingqiqo ye imeko ebonakalayo ngaphantsi kwe-1/10 yomzuzwana kwaye ezibonakalayo ziyiyo kusetyenzwe ngama-60,000X ngokukhawuleza kwingqondo kunombhalo.
ukufuna -Kuba i-infographic iqulunqwe ngumfanekiso omnye ekulula ukuwupapasha kunye nokwabelana kuwo wonke iwebhu, bavelisa i-backlinks eyonyusa ukuthandwa kwaye, ekugqibeleni, inqanaba lephepha obapapashayo kulo.
Inkcazo -I-infographic eyilelwe kakuhle inokuthatha ukuqonda okunzima kakhulu kwaye ichaze ngokubonakalayo kumfundi. Umahluko phakathi kokufumana uluhlu lwezalathiso kwaye ujonge imephu yendlela.
izikhombisi -Abantu abalandela umkhombandlela ngemifanekiso bayenza ngcono i-323% kunabantu abalandelayo ngaphandle kwemifanekiso. Singabafundi ababonwayo!
UkuBhanisa -I-infographic eyilelwe kakuhle ibandakanya uphawu lweshishini oluyiphuhlisileyo, nokwakha ulwazi ngophawu lombutho wakho kwiwebhu kwiisayithi ezifanelekileyo ekwabelwana ngazo.
uthethathethwano -I-infographic entle inomdla ngakumbi kunebhloko yokubhaliweyo. Abantu baya kuhlala beskena isicatshulwa kodwa bajolise ikakhulu ekubonakaleni kwinqaku, ukubanika ithuba elihle lokuqaqambisa nge-infographic entle.
Ixesha lokuHlala -Iindwendwe ezishiya indawo yakho zihlala zishiya imizuzwana emi-2-4. Ngexesha elifutshane elinje lokucenga iindwendwe ukuba zixhomeke, ukubonwa kunye ne-infographics lukhetho olungcono lokubamba ii-eyeballs zabo.
Ukwabelana -Imifanekiso kwabelwane ngayo kumajelo asekuhlaleni ngaphezulu kokuhlaziywa kwesicatshulwa. I-infographics iyathandwa kwaye kwabelwane ngayo kwimidiya yoluntu Amaxesha e-3 ngaphezulu kunalo naluphi na olunye uhlobo lomxholo.
Ukuphindaphinda -Abathengisi abaphuhlisa i-infographic enkulu banokuphinda babeke imizobo yesilayidi kwintetho yabo kwintengiso, kwizifundo, kumaphepha amhlophe, okanye bazisebenzise kwisiseko sevidiyo ecacisayo.
Ukuguqulwa -Yonke into ehamba infographic ehamba nomntu ngokusebenzisa umxholo kwaye iyamnceda ukuba abizele umnxeba kwisenzo. Abathengisi be-B2B bayayithanda i-infographics kuba banokubonelela ngengxaki, isisombululo, umahluko wabo, izibalo, ubungqina, kunye nokubiza isenzo sonke kumfanekiso omnye!
Kunye nokuphuhlisa eyam i-infographics kwindawo yam kunye nabaxhasi bam, ndihlala ndikhangela iwebhu ndikhangela infographics ukuba ndibandakanye kumxholo wam. Uyakumangaliswa yindlela umxholo wakho oza kusebenza ngayo kunye nomnye umntu oyinxalenye kwinqaku lakho… kwaye oko kubandakanya xa unxibelelana kwakhona nabo (osoloko kufuneka).
Eyona infographic yam yamva nje iziswe kumthengi ibiyi-infographic on xa iintsana zifumana amazinyo kugqirha wamazinyo okhonza abantwana eIndianapolis. I-infographic yinto enkulu kunye nephepha lokuya kwindawo esele ikhoyo ngoku kwindawo yabo, ngaphezulu kwesiqingatha sabo bonke abatyeleli kwindawo yabo entsha.
Iinkcukacha zoqhagamshelwano Highbridge kwi-Infographic Quote
tags: guqukaimiyalelohlala ixeshaNxaxhebangcacisoumfanekisoulwazi lomzoboizibalo ze-infographicukuhanjiswa kolwaziimizobo yolwaziAmanani entengisoinkumbuloukuziphindezelaenjini yokukhangela nounSEOukwabelanaezibonwayoukufunda okubonakalayo
Ngaba ikhowudi yeVenkile yeVidiyo yeyona Mhleli weKhowudi ye-OSX ilungileyo kwiNtengiso?
Iindlela ezi-5 zokusebenzisa ukumamela ekuhlaleni ukuphucula isiCwangciso seNtengiso
Sep 10, 2013 kwi-8: 23 AM
Kuya kufuneka uwuthande wonke umsebenzi ongena kuwo, kodwa ukuvavanya ubungqina kunokuba luncedo.
"umdla wokukhangela" ?????
Sep 10, 2013 kwi-10: 52 AM
Epreli 23, 2014 ngo-5: 30 PM
Molo Douglas. Ndiyalithanda inqaku lakho! Zininzi izibalo ezinomdla malunga nesi sixhobo sithandwa kakhulu sokubonwa kwedatha. Andikhange ndicinge ngendlela engcono yokubonisa ukusebenza kakuhle kwe-infographics kunokusebenzisa enye. Ndithembele kwisiqwenga sakho somxholo ukuba ndibhale iposti yam kwiMedium, apho ndikukhankanya khona. Ndicinga ukuba ungathanda ukuyikhupha: https://medium.com/inbound-marketing-clinic-at-nyu/61033a96ea78. Karinne
Epreli 23, 2014 ngo-7: 09 PM
Sep 26, 2015 kwi-2: 35 AM
Ingqokelela enkulu ye-infographics! Ndiyakuthanda ukufumana ibali lonke ndingasebenzisi nto ngaphandle kwemifanekiso. Loo nto inika umdla kakhulu. Bayanda ekusebenziseni oko ngokuqinisekileyo!
Okt 18, 2015 ngexesha 11:38 AM
Ndandiyifuna phantse yonke le nkcazelo ukuze ndifumane isabelo sam esikolweni. Ulwazi oluhle kakhulu,
Kwaye xa uzibuza ukuba ndineminyaka emingaphi, ndineminyaka elishumi elinanye kwaye sele ndiyithanda kakhulu le ngcaciso. Umsebenzi omhle, Mnu Douglas!!!!!!!!!!!!
Oktobha 18, 2015 ngo-5: 50 PM
Yinto emangalisayo uAmalshah! Enkosi ngenqaku… unomsebenzi oqaqambileyo ophambi kwakho.